Mustafoow, Jigjiga Way Guuxaysaa! - Jigjiga Online
HomeSomalidaMustafoow, Jigjiga Way Guuxaysaa!
Way aamusnaayeen, dareenkoodana way qarsanayeen, laakiin eegga si buuxda ayaa hurdada looga toosiyey.
Way xasuusan yihiin inay yihiin cududdii waddada ku ridday mucangaggii dad cunka ahaa ee kaa horreeyey, haddana waxay diyaar u yihiin inay dib u qalab qaataan oo ay meel adag istaagaan, jacaylkii iyo soo-dhoweyntiina waxa uu isku beddelay nacayb, laakiin ogow, iyagu nafsaddooda kamay keenin nac iyo xasad, umanay dhalannin, balse waa lagu abuuray.
Waa ayo, waa kuma, qofka aqbalaya, in hal maalin gudaheed jeelka loogu taxaabay 500 dhallinyaro ah oo iskugu jira arday, shaqaale, xoogsato iyo kuwo kale oo marmarsiiyo looga dhigtay, in sida adhi sayladda xoolaha la geynayo, duhur cad la soo tubo sabada.
Mudane Madaxweyne, Jigjiga waxay hore u tirsanaysay in dhabarka loo jeediyey, waxqabadkii ay mudnaydna ay weyday muddadii sannadka ahayd ee aad kursiga fadhiday. Ku darsoo, iyaga ayaa tirsanayey in tacaddigii ugu badnaa uu kasoo maray maamulladii hore, haddii ay tahay in lalaayo, in la dhaco, in dhulkooda si badheedh ah duhur cad looga qaato.
Mudane Madaxweyne, Jigjiga waxay tirsanaysaa, in ballamihii aad u qaadday aad kaga baxday.
Mudane Madaxweyne, Jigjiga waxay tirsanaysaa in sidii ay kuugu liseen aanad ugu hanbaynin.
Mudane Madaxweyne, Jigjiga waxay dabinta la qaniinsan tahay, in tabashadoodii hoose aad ugu dartay in nabarradoodii aad cusbo sii mariso.
Mudane Madaxweyne, Jigjiga waxay dareensan tahay, in aad ka leexatay jidkii halganka ee ay iyagu horseedka ka ahaayeen.
Mudane Madaxweyne, Jigjiga way cabbudhsan tahay, waxaanay ku dhowdahay inay sida fulkaanaha u qaraxdo.
Madane Madaxweyne, Mudane Madaxweyne, Mudane Madaxweyne….!
Maalmihii ugu dambeeyey, waxa masuuliyiinta Dawladda Deegaanka hadal-hayntoodu ahayd, in magaalada Jigjiga ay ka jiraan kooxo dhallinyaro ah oo rabshado sameeya, xilliyada habeenkiina dadka waxyeello gaadhsiiya, qaarkoodna baadha. Dhibaatadaas meelaha qaarkood ayaa laga dareemay, laakiin dawladda ayaa kaga jawaabtay inay xabsiga ku gurto in ka badan 500 dhallinyaro ah oo habeen kaliya guryahooda loogu daatay, waxaana dhallinyaradaas ku jiray, arday wax ka barta Jaamacadaha Addis Ababa, Maqale iyo Diri Dhaba.
Gawaadhi kolonyo ay askar ka buuxdo ayaa habeen hore magaalada gaaf-wareegayey, waxaanay qabanayeen qof kasta oo meel socda oo ay da’diisu ka hoosayso 35 jir, kuwaas oo iyadoo aanay jirin wax dembi ah oo ay faraha kula jireen amaba tuhun shaqsiyeed, laga ugaadhsaday faras magaalaha iyo kuwo kale oo gurayahooda lagala baxay.
Hoggaanka nabad-gelyada ee magaalada Jigjiga oo dhawaan xilka loo dhiibay, ayaa waxa uu wacad ku maray inuu dhallinyarada rabshadaha sameeya ka dhamayn doono magaalada, laakiin taas beddelkeeda, waxa magaaladii laga dabar-jaray daýartii u dhaxaysay 13 jir illaa 35 jir, waxaana dadka la xidhay ku jira rag laba xaas iyo dhawr carruur ah leh.
Marka si dhab ah loo eego, ujeeddada tallaabada ay xukuumaddu qaadday maaha inay la dagaallamaan rabshooleyaasha, laakiin waxa ka dambaysa ujeeddo kale oo aamusiin ah, sababtoo ah, toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxa odayaasha iyo wax-garadka magaalada Jigjiga ay codsanayeen in loo ogolaado bannaan-bax ay kusoo bandhigayaan tabashooyin ay qabaan, laakiin, halkii ay ka sugayeen in ogolaansho la siiyo, waxay dawladdu u daba-martay ubadkoodii oo ay jeelasha ku gurtay, si ay cabsi u geliso odayaasha dhaqanka ee doonaya in shacabku ay dareenkooda muujiyaan.
Waxa kale oo ficilladani ay muujinayaan, in wufuuddii xukuumadda ee uu hoggaaminayey Madaxweyne ku-xugeenka ee ay gobollada ku tageen, inay lasoo kulmeen weji gabax ah in dadku ay ka niyad-jabsan yihiin maamulkooda oo lagu eedeeyo inuu musuq daashaday.
Madaxweyne Mustafe oo muddo laba toddobaad ah fasax caafimaad oo aan la shaacinin dalka kaga maqnaa, ayaa markii uu dhowaan kusoo laabtay caasimadda Jigjiga, waxa uu dareen ka dhashay, qaabkii loo soo dhoweeyey, iyadoo ay indhaha dadka layaab ku noqotay inay arkaan, madaxweynihii sannadka joogay oo ay waardiyeynayaan in ka badan 25 gaadhi oo ciidan ah oo aad u hubaysan.
Lama garanayo saska jira, laakiin xaqiiqada ayaa waxay tahay, in shacabku ay guuxayaan, isla markaana codkooda iyo shucuurtooduba ku dhowdahay inay qarxaan oo ay kor u qayliyaan, si la mid ah waqtigii uu sii galbanayey Cabdi Iley.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabada habeenka kaliya lagu xidhay in ka badan 500 dhallinyaro ah oo iyadoon maskamad lasoo taagin si toos ah loogu qaaday Jeelka weyn ee magaalada Godey, ayaa waxay shacabka soo xasuusinaysaa taliskii Cabdi Iley oo sidan oo kale u dhaqmi jiray.